War deg deg ah: Axmed Madoobe oo magacaabay xubna ka tirsan golihiisa wasiirada December 7, 2013 8:20 am
Shariif Xassan iyo wasiirro ka socda dowalda uu ku wajahan Baydhabo
Dalka Niger oo Libya uga digtay in ay ka hoos marto Soomaaliya
Muuqaal: Gabar Suudaan ah oo qaaday Hees macaan oo Soomaali ah.
Wafdi Ka socda Soomaaliya oo ka qeyb gelaya Shirka qowmiyadaha Ee Ethiopia
Isku Aadka Koobka Adduunka Oo si rasmi ah loo Sameeyay
DAAWO: Taleex oo haawaneysa iyo dadkii oo weli ku laaban – Rasaas daadsan.
Nin Soomaali ah oo lagu qabtay isagoo kufsanaya gabar meyd ah
Deg Deg: Axmed Madoobe oo goor dhow magacaabaya Gol Wasiirrada
FOZWIA oo tilmaam layaab leh ka bixisay Nelson Mandela
Aqri magacyada raga lafilayo in ay R.wasaare ka noqdaan dalka
Cabdiweli Gaas oo Qardho ka sheegay hadal ka yaabiyay Faroole
Axmed Madoobe oo xiray Macalin Maxamed kamid ahaa raga aadka ugu dhaw
Wiil uu dhalay Jawaari oo qarash badan ku bixiyay howla u gaar ah.
Farmaajo oo ka hadlay magacaabistiisa R.wasaaranimo.
Qaraxii maanta lagu dilay xildhibaanka oo la ogaaday halka loola dan lahaa.
Tooshka Warqaad : Idaacad Ciidanka Xoogga dalka muqdisho ka furanayaan
(SAWIRRO) NUISO oo ku guuleestay qaliin lagu sameeyay wiil madaxa biya uga jireen.
DHAGEYSO : Barnaamijka Nasashada Jimcaha Warqaad & Wareysiga Cawaale Adan
Gudoomiyaha Baarlamaanka oo dhankiisa ka tacsi diray geerida Xildhibaan Feysal
Sii hayaha xilka R’iisalwasaaraha oo ka hadlay geerida Xildhibaan Feysal
War deg deg ah: Axmed Madoobe oo magacaabay xubna ka tirsan golihiisa wasiirada
Muuqaal: Gabar Suudaan ah oo qaaday Hees macaan oo Soomaali ah.Wafdi Ka socda Soomaaliya oo ka qeyb gelaya Shirka qowmiyadaha Ee EthiopiaIsku Aadka Koobka Adduunka Oo si rasmi ah loo Sameeyay
Daawo: Musharrixiin cambaareysay qaraxii ka dhacay Boosaaso.
DEG-DEG: Hoggaamiyihii geesiga ahaa ee Mandalle oo geeriyooday!DHAGEYSO: Saraakiisha Amniga Kismaayo oo ka hadlaya xaaladda amniTarzan oo sawir gacmeed boob tilmaamaya laga soo sameeyay xili…
Fanaanada Sahro Ileeye oo ku geeriyootay Dalka Ethiopia.
Dhageyso Gabay Qosol Badan oo isugu Jira Afcarabi iyo SoomaaliFarxiya Fiska oo Wacdaro Muujisay Hees cusub oo ay Qaaday Ciidul Fidriga “Daawo”Daawo Hees Macaan oo ay Ikran Caraale U qaday Calanka Soomaaliyeed.
Tooshka WarqaadTooshka Warqaad : Idaacad Ciidanka Xoogga dalka muqdisho ka furanayaan Waa maxay sababta ka dambeysa in Baydhabo maamul looga dhawaaqo? XOG: Xaaladda Kismaayo iyo ciidamo gaar ah oo amniga loo xil saaray! Qorshaha soo magacaabista Ra’iisul wasaaraha cusub + XOG MUHIIM AH XOG: Qaraxii Boosaaso ma midkii Taleex baa looga aargoosanayaa! XOG: Maxaa kala soctaa shuruudaha hor yaalla Ra’iisul wasaaraha cusub XOG: Dagaalkii Puntland ay ku qaaday Taleex, muxuu salka ku hayaa? Arimaha BulshadaDAAWO: Taleex oo haawaneysa iyo dadkii oo weli ku laaban – Rasaas daadsan. Nin Soomaali ah oo lagu qabtay isagoo kufsanaya gabar meyd ah Daawo: Musharrixiin cambaareysay qaraxii ka dhacay Boosaaso. DEG-DEG: Hoggaamiyihii geesiga ahaa ee Mandalle oo geeriyooday! DHAGEYSO: Saraakiisha Amniga Kismaayo oo ka hadlaya xaaladda amni Tarzan oo sawir gacmeed boob tilmaamaya laga soo sameeyay xili… Daawo: Maxaa loo qarxiyay Boosaaso, sawir hadda laga sameeyay! Muuqaal dad si arxan darra ah loo gubay (Maxaa loo adeegsaday?) Xulka Qaranka Somaliya ee Falaaro-Ganka Nin la xiray 1,500 oo jeer iyo Warbixin aan idin kaga diyaarinay visitor activity monitoring
MaqaaloSoomaaliya ma soomaali baa leh misa Zamankiyo wuxuu sido? Wasaarada horumarinta & A/Bulshada : Hogaanka Wasaaradaha Soomaaliya. Dilalka Madaxda Al Shabaab yaa ka dambeeya? Culeys dhig ee mid kale Qaad waa cilad heysata dowlada Soomaaliya. Puntland kana siib kana saar ( Riwaayad taxane ah Qaybtii 1-aad ) Madaxweyne Xasan oo hadal qiiro leh U Sheegey Shacabka Jubooyinka Fanaanad Soomaaliyeed oo ka Tilaab satay Dhaqankena Wanagsan + Sawiro Halkee Ku Tababarteen Kooxdii ka danbeeysay Weerarkii Westgate Sheeko gaaban oo Shakiga iyo isku dirka Soomaalida ka hadleysa UNICEF oo barnaamij wada sheekeysi ah u furtay gabdho Soomaaliyeed oo da’yar Madaxweynaha oo Diraya Hambalyo ku Aadan 59 guuradii ka soo Wareegatay Calan Soomaaliyeed Duliyayaasha ugu badan ee ku dul-hurdo Diyaaradaha oo la sheegay Dalka ay kasoo jeedan (Daawo sawiradda) Naxariis Daranaa, in la eega bal Ninkaan sida uu Gabadha ugalay (Sawiro + Muuqaal) #22306 (no title)Nagala Soo Xariirtaleex banaabaxgacan iyo lug go’andhalinmuuqaalSoomaalilayaabka baaluunkaDaawo Muuqaalka xayawaan dagaalamaya iyo kumanaan dad ah oo daawanayaAxmed MadoobeGaafowQARAXDaawo Video : Hodan C/raxman oo Qurbo joogta Muqdisho hees cajiib ah ku ceebeysay!!!Shaaribaha iyo BakistankufsikubadTarsanSaado-CaliFAYSAL-WARAABE-DHEGAYSOBEEGSIGASh UmulProf ToganeCali Maxamed GeedifoolkaanomudaaharaadthanksgivingXasuuqBAARLAMAANKAgooltuugAbu MuscabmuuqaalGUBASHOMuuqaal: Qarixii maanta ee halakeeyay Boosaasogabar